Ma Bandhig Buug, mise Bandhig Dhaqaale ? – Radio Daljir
Siteenbar 14, 2017 1:04 g 0
Anigo ah qoraaga dhigaalkan aad baan aga xumahay in aan idin la wadaago dhambaalkaan, haddana sida ay wax u dhaceen in aan ka aamuso damiirkaygu wuu i siin waayay. Waxaa se jeclaaday in aad sida aan wax u arko idin la wadaago aragtadideyda gaaban ee ku saabsan Bandhigga Carwada Buuggaagta Muqdisho “Mogadishu Book Fair”. Waan ogahay akhriste qudhaada in aadan ku faraxsaneyn soo bandhgista dhigaalkan, laakin aan anigu jeclaaday in aan xilligaan ku soo beego in aan idin la wadaago.
Marka aan maqlo magaca “Bandhig” durba waxaan dib xasuusin u jaleeciya “maankeyga” waayihii wacnaa ee dowlad wanaagga ay inta badan inooga sheekeeyeen macallimiinteenna waxbarshada kheyr Alle ha siiye. Waa farxad kale in aan maanta shaahid aan u ahaado in muddo ah wax sheeko aan u maqli jiray in marqaati nool aan u ahay, waxa dhacayana ay yihiin wax aniga iyo kumanaanka dhallinyaro iila mid ka ah saameenayaan gaar ahaan kuweena aan marna ka tagin dalkeena hooyo ee Soomaaliya.
kolkan aan u soo dhaadhaco nuxurka ciwaanka qormada. Sida aan wada ognahay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa maalinta berri oo jimca ah lagu soo gabagabeyn doona “Inshaa Allaah” Bandhigga Carwada Buuggaagta Muqdisho ee sanadkii ba mar la qabto. Waana sanadkii seddaxaad ee la qabto. Waa farxad iyo guul u soo hooyatay akhristiyaasha iyo qorayaasha Soomaaliyeed daafaha dunida meelkasta oo ay ku sugan yihiin. In wax la qoro waxa ka horrerysa in wax la akhriyo. Soomaalideena inta badan waxa la innagu tilmaama in aynu nahay bulsho hadal keliya ku kooban oo aan wax akhrinin “Oral Society” taasi in ay beenowday waxa caddeyn kuug filan tartamada ka socda dhammaan magaalooyinka Soomaalida. Balse waxa guuldarro weyn ah in, la niyadjebiyo dhallinyaradii Soomaaliyeed hanka wanaagsan ka lahaa akhris iyo qoraal, jeclaana in maqaam sare ay ka gaaraan hal-abuurnimada.
Sida aynu wada ognahay dhamaanteenna magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo iyo Garoowe waxa lagu soo bandhiga buuggaag la qoray, ha isugu jiraan kuwa sanadkaasi la qoray iyo kuwa sanadihii sii horreeyay la qoray. Laakin waxa su’aal ka taagneyn in lagu kala duwan yahay hab maamuuska marti sharafta u badan qorayaasha lagu martqi qaado. Hargeysa, Kismaayo iyo Garoowe waxa aan ka sheego waa igu gef iyo gardarro cad, sababto ah waxa dhacay caddeyn uma haayo. Waana igu dembi weyn wax aan hubin in aan bulshada la wadaago. Balse waxaan waqti siyey in aan wax ka ogaado kan Muqdisho, maadaama aan caasimadda ku sugannahay. In la sooro “martiqaado” qorayaasha ka sokow, badana waxa dhaqaalaha lagu bixiya dad aan shaqo ku lahyen wax qoris iyo akhrin toona, waa adduun iyo xaalkiis!
Sida aan xog ogaal u ahay bandhig buuggeedkan waxa fangareeya Hay’ado katirsan Qaramada Midoobey “United Nations” oo aan hadda iila habooneyn in aan magacyadoodi halkaan ku xuso. Waana nasiib xumo in dhowr sannadood kaddib aan annaga isku filnaan weenay. Waxaan caada iyo ceeb la’aan ka dhigannay in aan gacan hoorsano Ajaaniib aan kala garaneyn waxa ay naga damacsan yihiin iyo waxa kale. Bandhigyada noocaan oo kale ah bersimaadkii qiima weyn bay bulshada Soomaaliyeed ugu fadhiyeen qabsoomiddooda, weliba waxa loogu imaan jiray daawasho ahaan dalal badan oo qaaradda Afrika ka tirsan. tusaale “Carwadii Qaranka”!
Soomaaliya ahaan waxaynu laheyn carwo ama bandhig, kaas oo lagu soo bandhigi jiray wax soosaarka warshadaaha iyo wakaaldaha dalka, waxayna ku taalay magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Bandhiggan waxaa la qaban jiray sanadkiiba mar. Run ahaantii marka la qabanaayo bandhigga carwadan waxay ahayd mid xiiso weyn ay u qabaan bulshada ku nool caasimadda. Waaayo caruurta iyo dhallinyarada ayaa ahaa kuwo aad u suga carwadan. Habeenkii oo dhan waxay daawan jireen waxyaabo kala duwan oo aanay horay u arag amaba dalkoodu sameeeyo, taas oo muujinaysa horumarka xagga farsamadda “Technical Development”.
Waxa intaa sii dheeraa bandhigga iyaguna ay soo bandhigi jireen duur joogta Soomaaliya sida Libaaxa, Gariga, Waraabaha, Shabeelka iyo kuwo kale oo badan. Haddaba carwadan waxay tusaale u ahayd wax soosaarka warshadihii Soomaaliya. Soomaali ahaan waxaanu aheenay waddan warshado leh dadkiisa ku faana, laakin waxaa nasiibdarro ah muddada 26 sanno ee dhibaatada ka jirtay Soomaaliya in warshadihii tirada badnaa Alle na siiyay aan qaarkood dib loo hirgelinin.! Dal walba waxaa uu ku dadaalaa sidii uu isugu tiirsnaan lahaa, uuna isugu tashan lahaa, uuna bulshadiisa uga haqabtiri lahaa baahida, cudurada iyo jahliga dilooday, islamarkaana uu uga difaaci lahaa cadow kasta oo kusoo gardarooda dhulkooda iyo dhigaalkooda uu Alle subxaanahu watacaala ugu deeqay. Haddaba arrintu marka ay halkaan marayso waxaa is weydiin mudan, horta yaa bandhig buuggeed loo qabanaya ?
Qoraaga dhib iyo rafaad waxa ugu filan muddada uu diyaarinayey buuggiisa, waxaasi la mid ah cidda dhiiragelinaysay sida tifaftiraha buugga oo marweliba wax weydiinta dhibsanayay. Waan ka xumahay in maanta qaarkood aan ku faraxsaneyn waxa dhacay. Anigu ba aan ka mid ahay. Sanadkii hore “2016” ayaan dalbaday in aan kaqeybgalo Bandhigga Carwada Buuggaagta ee Muqdisho, xilligaasi waxba iima diyaarsaneyn. Balse waxa ay iga aheyd tijaabo kaddib, kolkii aan dad badan xilligaasi dhaliilahood aan dhageestay ayaan eegayay waxa ka jira run iyo been. Waxaan si toos fariin qoraaleed “text message” ugu diray beejka feysbuugga ay ku leeyihiin qolada sanadkii ba mar ay qabtaan ee Mogadishu Book Fair. Hadda waxa laga jooga 13 billood weli wax jawaab ah la ima siinin ogolaansho iyo diidma toona, waana macquul in aysanba fariinteyda arkin mashquul iyaga u gaar ah awgii.
Waxa aan raadiyey oo aan baadi goob u galay in aan helo buugtii sanadkii hore la soo bandhigay bal haddi ay jiraan goobo cayiman oo loogu hagaagi karo. Nasiib xumo kale, malahan meel toos ah ee looguu hagaago, marka laga reebo rugaha lagu iibiyo buugta oo inta badan iyaga maalgashta. Waxaan la kulmay ugu yaraan toban qorayaal oo sanadkii hore buug soo bandhigeen, waxaan weydiyey tirada ay daabaceen, intoodi badan waxa ay ii sheegeen ugu badnaan 10 buug in ay madashu la shir tageen. Lama yaabayo tiro yaraanshaha buuggaagtooda, maxaa yeelay ma jirto madbacad “Qaran” oo buugta kuu daabcda ama ku maalgelisa, taasna waa nasiibdarro kale ay heysato qorayaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa da’da yar ee higsi wanaagsan ka damacsan in ay wax qoraan.
Anigu Mascuud ahaan iima qorsheysaneyn in aan sanadkaan ka qeybgalo duruufa jira oo aniga gaar ii ah awgii. Wax aan ka sheego qollada abaabulka hadda wado malahan. Shakhsi aan sharaftiis ku bahdilayana halkan ma jiro sida aad dhigaalkeyga ka dhadhansan kartid, laakin waxa nasiib darro ah in qorayaal badan oo jooga magaalooyinka Hargeysa, Garoowe, Laascaanood, iyo Muqdisho intii loo sheegay in la diiwaangeliyay misana ballantii looga baxay. Qoraaga muddo ku naawilayey in uu Bandhigga Carwada Buuggaagta Ee Muqdisho ka soo muuqanayo, misana lagu wargeliyey in liiska ka buuxsamay, ma suurtagal baa, buug kale in uu bulshada u soo saaro ? Haddii goobtii dhiiragelinta ay noqotay gole qofkii la raba la martiqaadaya, qofkii aan la rabin liiska laga saaraya, yaa dhiiragelin u muujinaya qorayaasha hanka leh ? Ma bandhig buug, mise bandhig dhaqaale ? Waa weydiimo igu soo noqnoqda in badanna aan jawaab u waayay.
Ugu danbeyn, qaban qaabayaasha cid kuma heysato dhaqaalahooda. Xor bay u yihiin cidda ay doonaan ha marti qaadaan, cidda aysan dooneynin liiska haka saaraan, laakin waxaan raba in aan u qiro dhallinyarada Soomaaliyeed hanka wanaagsan leh hakad u geli maayaan hor u socodshadoodi khaladkii aad sanadkaan ka gasheen. Haddii waxqaabadkiinu daacad idin ka yahay xafiis inta aad furtaan baad bulshada kula wadaagi laheydeen macluumaadkiini, halkaasina aad idin kaga imaan laheyd fariimo “messages” isugu jira dhaliil iyo ammaan ba, weliba waxaad samey laheydeen guddi idin qaabilsanaada buugta mudan in carwada lagu soo bandhigo iyo kuwa aan mudneyn. Dib u milicso magaaladan “Muqdisho” waxa lagu noola iyadoo xabad sigaar ah la isku dili jiray, sigaarku se kala xaraarad fiicane, oo weliba inta u dambeesa “haashka”. Maanta inta yar ee nabadda le heysto haddii aad is leedihiin sanadkiiba mar Muqdisho dhaqaale ka soo sammeeya, waa fikrad aan maan fiyow ka imaanin e, dib isugu noqda jaalleyaal.
Hilmaan hadal kuma jiro. Si la mid ah ayaan raba in aan fursaddaan aga faa’ideysto tiimka Maktabadda Akhriska iyo Dhaqanka ee IFIYE . Rag iyo dumar ba walaalayaal waxa tusaale u tihiin dhallinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dambeysa dal jaceylka in, aad abuurtaan dhaqan akhris, is dhegaysi iyo dood caafimaad qabta waa arrimo aan sahlaneyn. Alle ka sokow, magaalo luuq weliba hub ka muuqan jiray baad u beddesheen in qalinka lagu tartamo. Tartanku kala xiisa badan weliba aad ku dhiiragelisaan in habka wanaagsan ay u isticmaalaan qallinkooda oo ay ka kontoroolaan xagga xumaanta. Dhammaantini idin kala garan maayo, laakin waxaan inta isku aragtida nahay u qiraya in doorkii samatabixinta dalka kaalintii idin kaga aadaneyd aad ka qeybqaadanaysaan. Dadkiini iyo dowladdiiniba abaalmarin dhiirigelineed ayaad ka mudan tiihiin, waaba haddii dowladnimo ay jirto.
Sidoo kale waxaan halkaan hambalyo iyo bogaadin uga diraya dhammaan qorayaasha Soomaaliyeed oo isaga kala yimid dal iyo dibad, nasiibkana saaciday sanadkaan in ay ka qeybgalaan Bandhigga Carwada Buuggaagta Ee Muqdisho iyo bulshada reer Muqdisho weliba kuwooda wax akhriska jaceel ka faa’ideysi wacan walaalayaal. Si gaar ah waxaan u hambalyeenaya saxibkeyga Bisle Hassan Mohamed ee uu qoray buugaagta kala ah:
1: Kaftankii Bisle
2:Dhaqan Jikaar, iyo saaxibkeyga Ibraahim Noloshaa oo isaguna uu qoray Jamashada Haweenka saaxiibayaal waxaan idin leeyahay “welli waan u oomannahay qoraaladiinna ee, horumar wacan”.
Dhaliisheydu wax bay toosisaa ee, wax ma qaloociso.
Ustaad Mascuud Warsame Isxaaq
Maqaalo Kale 144 Wararka 8574